नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com): उद्यमी पवन संघई अपहरणमा परेको ३ सातापछि फिरौती तिरेर बुधबार बिहान मुक्त, ३ करोड रुपैयाँ भारु दिएपछि अपहरणकारी समूहले उपत्यकाभित्र बाटै उनलाई छोडे
उद्यमी पवन संघई अपहरणमा परेको ३ सातापछि फिरौती तिरेर बुधबार बिहान मुक्त, ३ करोड रुपैयाँ भारु दिएपछि अपहरणकारी समूहले उपत्यकाभित्र बाटै उनलाई छोडे
अपहरण भएको ३ साता सम्म निदाएर बस्ने प्रहरी प्रशासन ३ करोड तिरेर मुक्त भएपछी बल्ल सोधखोज गर्न थाल्छन् !!!
हाम्रो नयाँ नेपाल, लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपाल जहाँ यस्तो पनि हुन्छ ! वा सरकार, वा प्रहरी प्रशासन !
उद्यमी पवन संघई अपहरणमा परेको ३ सातापछि फिरौती तिरेर बुधबार बिहान मुक्त भएका छन् । आर्या फर्मास्युटिल्स लगायत कम्पनीका सञ्चालक संघई पुस ७ गते बिहान कमलादी गणेशस्थान नजिकबाट अपहरणमा परेका थिए । फिरौती पाएपछि अपहरणकारीले बिहान ४ बजे डिल्लीबजारस्थित घर नजिकै ल्याई उनलाई छाडेको परिवार निकट स्रोतले जनायो । संघई परिवारका एक नातेदारले बताए अनुसार भारतमा ३ करोड रुपैयाँ भारु दिएपछि अपहरणकारी समूहले उपत्यकाभित्र बाटै उनलाई छोडेका हुन् । अपहरणको सूचना पाएपछि प्रहरीले संघई परिवारका केही फोन नम्बर निगरानीमा राखेको थियो । प्रहरीले निगरानीका नम्बरमा अपहरणकारी समूहले एक सातादेखि फोन गर्न छाडेका थिए । 'परिवारले अर्कै नम्बरबाट कुरा मिलाएर मुक्त गराए' स्रोतले भन्यो । संघईलाई काठमाडौं वरपरकै भिरालो ठाउँमा राखिएको परिवार निकट स्रोतले बतायो । संघईको स्वास्थ्यस्थिति हाल सामान्य छ । मुक्त भएको खबर पाएपछि घर पुगेका महानगरीय अपराध महाशाखाका एसएसपी देवेन्द्र सुवेदी र डीएसपी सोमेन्द्रसिंह राठौरलाई परिवारजनले उनीसँग कुरा गर्न
दिएनन् । 'अनुसन्धानको दायित्व प्रहरीहरूको हो, यहाँबाट जानुस् र आफैं पत्ता लगाउनुस्,' परिवारलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो । परिवारका अरू कोही समेत कुरा गर्न तयार नभएपछि अधिकृतद्वय केही मिनेटमै फर्केका थिए । 'परिवार कुरा गर्न इच्छुक नभएपछि दबाब दिन पनि भएन,' एसएसपी सुवेदीले भने, 'जसले अपहरण गरेको भए पनि छिट्टै पक्राउ गछौ ।'